Mararka aad u jeclaan lahaa hees ku Spotify oo aad rabtid in aad u badbaadin qalabka sida file mp3 ah iyo ma ahan oo keliya ku Spotify. Laakiin, waxaad awoodi waayeen inay sidaasi sameeyaan? Oo walwal No sababtoo ah hadda aad samayn karto oo dhan in aad rabto in aad la rippers ah. Dooxeen ha lahaa waad dhagaysan hoorto lacag la'aan ah, download in qalab aad , nuqul oo tareenka la wadaag saaxiibadaada. Waxaad edit karaa tareenka ee will.Spotify Rippers:
• Wixii Mac
Streaming taariikhqorihii music, music celiska ah; iSkysoft taariikhqorihii audio
• Wixii daaqadaha
Streaming taariikhqorihii music, music celiska ah; iSkysoft taariikhqorihii audio, dhiiran
• Wixii Linux (Ubuntu)
Dhiiran, oo taariikhqorihii Audio
Halkan waxaa ku qoran liiska qaar ka mid ah rippers in iman kara anfacaya, taas aawadeed.
Part1. Taariikhqorihii music Streaming
Qaybta 2. celis Music
Qaybta 4. iSkysoft taariikhqorihii Audio
Qaybta 5. taariikhqorihii Audio
1. Streaming music taariikhqorihii
Wax soo saarka Wondershare Tani waa fududahay in la isticmaalo iyo ayaa loo arkaa mid ah kuwa ugu fiican. Waxa uu oggolaan in aad si ay u qoraan audio meel kasta online (Idaacadaha, YouTube, Spotify iyo ilo kale oo geeyo online). Isticmaalka taariikhqorihii music Wondershare waa mid fudud quruxsan.
Gashato aad kombuutarka
Si aad u bilowdo diiwaan-saxaafadeed button record on interface ah ee geeska bidix ee sare
muusig ee isha iyo taariikhqorihii ahaa si toos ah markii uu doonaynin music waxay ka bilaabantaa isha. Fiiro Gaar ah - haddii ay dhacdo aad diiwaan kuwan raadkaygay badan in la sii wado, software si toos ah u abuuraa faylasha gaar ah oo ay la socoto faahfaahin ah oo ka soo jeeda isha.
badbaadin duubay oo wuxuu ku raaxaysan
• nidaameed dhammaan faahfaahinta si toos ah
• software Small sidaas ma meel badan oo loo baahan yahay
• Free version uu leeyahay muuqaalada xadidan
• ma shaqayn kara ilaha oo dhan.
2. celis Music
Mac link: http://applian.com/mac/ (ma free)
Waa abuuridda cajiib ah oo waxtar leh si rikoor music shakhsi ahaan loo isticmaalo. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa la soo dajiyo, dooro network iyo weeraray record.
rakibi aad kombuutarka
ay tagaan goobaha dooro meesha aad rabto in aad badbaadin jeexid ah, qaab aad u baahan tahay.
guji Hanuuniyaa, dooro adeeg bixiyaha (madal music) ee
booqo goobta music ah, muusig. Music celis toos ah u bilaabi lahaa duubo iyo DEAD faahfaahin ah isku mar.
badbaadin oo wuxuu ku raaxaysan.
• Pre-xilsaaray xiriir la shabakadaha music caan ah oo inta badan loo isticmaalo
• tagging Auto faahfaahinta
• Its ma lacag la'aan ah Mac.
• muuqaalada Limited on version xorta ah Qiyaastii 15 $ u version buuxa
Waa codsi aasaasiga ah iyo jeexitaanka tiro badan oo kuwan raadkaygay laga yaabo in aysan user saaxiibtinimo. Waxay u baahan tahay dadaal lagu doonayo in dooxi tareenka. Isticmaalayaasha u baahan doontaa inaad magaca ah kuwan raadkaygay iyo faahfaahinta kale ee gacanta. Laakiin waxaad ka heli kuwan raadkaygay edit iyo beddelka kale ee isticmaalaya software this.
Sida loo isticmaalo software this?
bilowdo dhiiran oo markaas furan "edit 'menu oo dooro' doorbidida '. Channel dhig sida rikoor.
riix badhanka rikoor ka dibna ciyaaro music ku saabsan codsiga Spotify ah. Fiiro gaar ah: dhiiran Qori oo dhan music ah / codadka wax soo saarka ka hadla, sidaas buuq kasta oo kale ama foomka dhawaaqa nidaamka ay sidoo kale la duubay. Sidaas si ay qas ka fogaadaan u soo noqdo xidhi.
stop saxaafadda iyo map maqal ah la furi doono. Ku dar calamado in ay doortaan qaybta track aad u baahan tahay oo u badbaadin. Waxaad diyaar u yihiin inay tagaan.
• Dooro qaybta wadada.
• Waxaa loo baahan dadaal ku filan.
• La'aanta user muuqaalada saaxiibtinimo
4. iSkysoft taariikhqorihii Audio
Waa codsi quruxsan cajiib ah oo waxtar leh ee ku caashaqay music (gaar ahaan Mac, waxaa loo isticmaali karaa daaqadaha sidoo kale). Tani ma aad niyad jabin lahaa diinta.
rakibi codsiga ku saabsan nidaamka.
ku dhuftay button rikoorka oo taga si file il (music geeyo goobta) iyo bilowdo wadada.
iSkysoft toos ah u bilaabi lahaa duubay sidii bilowgii music ah.
Fiiro gaar ah: u syncing faahfaahin track aad u baahan tahay inaad iska diiwaangeliso iyo iibsato version dhameystiran.
• waxtar leh in la dooxi kuwan raadkaygay
• fududahay in la isticmaalo
• u baahan tahay version buuxa, adeeg iibsado si ay u isticmaalaan dhammaan qaababka
• Ma taageeri karaa dhammaan saldhigyada geeyo ee
5. taariikhqorihii Audio
Tani taariikhqorihii audio waa u faa'iido badan ee Gnome iyo Ubuntu (Linux) isticmaala. Waxaa loo isticmaali karaa version 10,10 iyo wixii ka dambeeyey. Its aad u anfacaya iyo fududahay in la isticmaalo. Waxay keeni kartaa shaqo duubo u hagaagsan oo ciyaartoyda warbaahinta Linux iyo sidoo kale Skype ah.
rakibi codsiga oo aan bilowno ka 'Codsiga Lens'
Talaabada 2: bilaabi duubay, dooro wax soo saarka sida mp3 iyo ilaha sida rikoor.
iStep 3: muusig ee codsiga geeyo ah oo wuxuu ku raaxaysan.
• Customise sida isticmaalka
• Limited content iyo qaabab taageeray
> Resource > Spotify > Top 5 Spotify Rippers